कागुया समा सिजन ३ रिलिज मिति + नयाँ क्यारेक्टरहरू - क्र्याडल दृश्य
कागुया समा सिजन ३
कागुया समा सम्भावित / आगामी रिलीजहरू
by Dima 29th अक्टोबर 2021 12th जनवरी 2022
एक टिप्पणी छोड कागुया समा सिजन ३ रिलिज मिति + नयाँ क्यारेक्टरहरूमा
कागुया समा एक मायालु छ रोमान्स एनिमे जुन मूल रूपमा २०१९ मा बाहिर आएको थियो। यस लेखमा, हामी कागुया समा सिजन ३ सम्बन्धी सबै कुराहरू छलफल गर्नेछौं। कागुया समा सुरु गर्नको लागि एकदमै रोचक कथा थियो तर दोस्रो सिजन बासी हुन थाल्यो र यसले मुख्य कथा र विभिन्न एपिसोडहरू कसरी मेल खान्छ भन्ने सन्दर्भमा प्रभाव पार्छ। कथा २ जना विद्यार्थीको वरिपरि केन्द्रित छ जो अर्कासँग प्रेममा छन् तर एकअर्कालाई स्वीकार गर्न डराउँछन्।
कागुया सम प्रेम युद्ध होको कथा धेरै सीधा अगाडि छ र यो धेरै सरल छ, कम्तिमा भन्न को लागी। दुर्भाग्यवश, यसले पछि केही समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ र म यसमा प्रवेश गर्नेछु। कथाको मुख्य विषयवस्तु पनि यही कारणले कागुया समास सिजन ३ मा रहनेछ ।
शृङ्खला मुख्यतया चालहरू र रणनीतिहरूमा निर्भर गर्दछ जुन प्रत्येक क्यारेक्टर (केवल दुई मुख्य क्यारेक्टरहरू) प्रयोग गर्दछ, र यही हो जहाँ अधिकांश कथा र गतिशीलता खेलमा आउँछन्। कागुया शिनोमिया & मियुकी शिरोगाने दुबै विद्यार्थी परिषदमा (कुनै आश्चर्य) छैनन्, शिरोगने परिषद्को अध्यक्ष भएर ।
कागुया साममा मुख्य पात्रहरू
पहिलो, हामीसँग छ मियुकी शिरोगाने परिषदको अध्यक्ष को हो, कहाँ शिनोमिया विद्यार्थी पनि हुन् । उहाँ अग्लो, निलो आँखा र गोरो कपाल भएको सुन्दर हुनुहुन्छ। उसले शान्त र आत्मविश्वासी कार्य गर्ने प्रयास गर्छ तर सामान्यतया प्रक्रियामा असफल हुन्छ। राष्ट्रपति कगुया समास सिजन ३ मा उपस्थित हुने निश्चित छ ।
यो, मेरो विचारमा, एक राम्रो चरित्रको लागि बनाउँछ, किनकि उसको बाहिरी खोल वा उपस्थिति उसको भित्री आत्मसँग टकराव हुन्छ, प्रक्रियामा राम्रो गतिशील सिर्जना गर्दछ। उनले विद्यार्थी परिषद्को कालो पोशाक लगाएका छन् ।
अर्को, हामीसँग छ कागुया शिनोमिया, उपाध्यक्ष। उनी धेरै जसरी काम गर्छिन् शिरोगने, आफ्नो भित्री आत्मसँग लड्दा आत्मविश्वास र शीतलताको नक्कली कम्पोजर राख्ने प्रयास गर्दै। उनी सामान्यतया एकदम औपचारिक छिन् तर एकै समयमा लजालु पनि छिन्, जसरी भए पनि मिसिभ भाग्यको सम्पदाको रूपमा, उनको चुस्त स्वभाव कहिलेकाहीँ बाहिर निस्कन्छ।
उनी सामान्यतया आफ्नो धनलाई पनि लुकाउन खोज्छिन्, कहिलेकाँही यसलाई लुकाउन खोज्छिन्। उसको कालो कपाल छ जुन उसको टाउकोको पछाडिपट्टि ब्यान्ड प्रयोग गरी राखिएको छ, उसको आँखा रातो छ र सामान्य विद्यार्थी कालो कालो पोशाक।
3 हो चिका फुजिवारा विद्यार्थी परिषद्का अर्का सदस्य । मलाई सही सम्झना छ भने उनी विद्यार्थी परिषद्की सचिव थिइन् । एउटा कुरा मलाई पक्कै थाहा छ त्यो हो कि मैले उनलाई मेरो सचिवको रूपमा कहिल्यै राखेको थिइनँ। उनीसँग कष्टप्रद आवाज, गुलाबी कपाल र निलो आँखा छ। उनी औसत उचाइको छिन् र एक सामान्य हाईस्कूल विद्यार्थीको लागि निर्माण गर्छिन्।
त्यो बाहेक मलाई लाग्छ उनी गाउन र नाच्न सक्छिन् र मैले उनलाई सम्झेका सबै कुरा यही हो। उनी शिरगोन्नेलाई भलिबल कसरी खेल्ने र केही भागमा कसरी गाउने भनेर पनि सिकाउँछिन् जसले उनको चरित्रलाई गहिराई र महत्त्व दिईरहेको छ, जुन दृढ रूपमा आवश्यक थियो।
अन्तमा, हामीसँग छ यु इशिगामी, जसले शान्त इमो किड क्यारेक्टर ट्रोपलाई पूरा गर्दछ जुन मैले सुरुदेखि नै उहाँसँगै मन पराउँथे। उहाँसँग एक सुन्दर उथले चरित्र छ जुन वास्तवमै विस्तार गरिएको छैन वा पछिको एपिसोडहरू सम्म कुनै पनि प्रकारको गहिराइ दिइएको छैन। सिजन 2.
उहाँ धेरै अग्लो हुनुहुन्छ, लामो कालो कपालले उसको एउटा आँखा छोप्छ। यसका साथसाथै उसको घाँटीमा सधैं हेडफोनहरू छन् जस्तो देखिन्छ, यस बाहेक त्यहाँ उहाँको बारेमा भन्नको लागि धेरै छैन। उसको चरित्रसँग द्वन्द्वात्मक बनाइएको छ फुजिवारा जबकि शिरोगने र शिनोमिया गतिशील सञ्चालन भइरहेको छ।
कागुया साममा उप पात्रहरू
यसमा उप-पात्रहरू कागुया सम प्रेम युद्ध हो सबैले आ-आफ्नो काम राम्ररी गरे र म तिनीहरूको बारेमा नराम्रो भन्न सक्दिनँ। तिनीहरू सबैले आफूले गर्नुपर्ने काम गर्छन् र तिनीहरूमध्ये कसैलाई पनि सामान्य लाग्दैन। यी क्यारेक्टरहरू सबै Kaguya Sama सिजन3मा देखा पर्नेछन्। यसो भनिएको छ, तिनीहरू धेरै रोचक पनि थिएनन्, खास केही थिएन तर त्यो वास्तवमा शोको मुख्य फोकस होइन, त्यसैले तिनीहरूको नाम।
केई शिरोगाने (मियुकीकी बहिनी)
कागुया समका उप-क्यारेक्टरहरू! प्रेम युद्ध हो!
के त्यहाँ कागुया समा सिजन3हुनेछ?
Aka Akasaka (जहाँ एनिमे आधारित छ) द्वारा लिखित मङ्गा शृङ्खलाले पनि यस्तै लोकप्रियता पाइरहेको छ र 2019 मिलियन भन्दा बढी प्रतिहरू बिक्री भएको4मा नवौं-सर्वाधिक बिक्रि हुने मंगा हो। त्यसोभए, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि मंगाको लागि चाहना पहिले नै धेरै उच्च छ र यसले बाहिर भएको समयमा धेरै ध्यान केन्द्रित गरेको छ।
त्यहाँ गएको छ कुनै अधिकारी छैन को लागि रिलीज मिति 'प्रेम युद्ध हो' सिजन ३. यद्यपि, हामीलाई थाहा छ कि नयाँ OVA एपिसोड मे १९, २०२१ मा जारी गरिएको थियो। एनिम कागुया समा! धेरै लोकप्रिय र सम्भावना छ कागुया समा सिजन3धेरै उच्च छ। यो किनभने एनिमे अनुकूलनको लागि नाफा धेरै उच्च हुनेछ, र त्यसैले ROI यसको लायक हुनेछ।
सिजन ३ कहिले रिलिज हुन्छ?
CV ले उल्लेख गरेको छ कि सिजन एक जापानमा जनवरी देखि मार्च 2019 सम्म हाम्रो लेखमा प्रिमियर भयो यदि कागुया समा हेर्न लायक छ जुन तपाईं यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ: https://cradleview.net/is-kaguya-sama-worth-watching, त्यसपछि अप्रिल र जुन2मा सिजन 2020 पछि। यदि anime को उत्पादन सेट गरिएको छ (र तिनीहरू सामान्यतया छन्) उही ढाँचा पछ्याउन, तब हामीले3को मध्यदेखि तेस्रो त्रैमासिक वरिपरि सिजन 2021 देख्नेछौं।
CV ले पनि अनुमान गर्छ कि यदि कागुया समा सीजन32021 मा देखा पर्दैन, त्यसपछि हामीले अर्को सिजन देख्नेछौं कागुया समा 2022 हुनेछ। यद्यपि, एनिम उद्योग एकदमै अप्रत्याशित हो र हामी निश्चित हुन सक्दैनौं कि कहिले को सिजन3कागुया समा जारी गर्नेछ, तर हामीले उपलब्ध तथ्यहरूको आधारमा उत्तम सम्भावित जवाफ दिएका छौं।
कागुया समा सिजन ३ को बारेमा अन्तिम अभिवादन
कागुया समा एक धेरै लोकप्रिय र राम्रो मनपर्ने एनिमे हो जुन 2019 मा बाहिर आयो। सिजन2त्यसपछि पछ्याइयो 2020 र धेरै राम्रो स्वागत पनि भयो। को सम्भावना क सिजन2धेरै उच्च छन् र प्रशंसकहरूको चाहना र आवश्यकता पनि सधैं उपस्थित छन्। यो लाइन तल केही समय हुन सक्छ तर एक आधिकारिक घोषणा को लागी कुनाको वरिपरि छ कागुया समा सीजन।।
तपाईं मात्र यसको लागि बाहिर सुन्न तयार हुनुपर्छ। तपाईं तलको हाम्रो मेलिङ सूचीको सदस्यता लिएर एनिमे र थपको बारेमा सबै नवीनतम समाचार र लेखहरूसँग अद्यावधिक रहन सक्नुहुन्छ:
अघिल्लो प्रविष्टि हाजिमेटे नो गल सिजन २ मे तपाईले सोचे भन्दा नजिक छ
अर्को प्रविष्टि टाइटन सिजन3को अन्त्यमा आक्रमण सुन्दर छ